नयाँ सेनिटरी प्याड - बजारमा नयाँ - प्रकाशितः कार्तिक १३, २०७५ - नारी
केही स्कुलमा यससम्बन्धी कार्यक्रम पनि गरिसकेको डा. श्रेष्ठले बताइन् । यो सेनिटरी प्याड प्रयोगपछि धोएर फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यस्तै प्याड घरमा कटनका कपडाबाट घरमै पनि बनाउन सकिन्छ ।
डा. गरिमाको अवधारणामा बनेको यो प्याड उनकी आमाले डिजाइन गरेकी हुन् । यस्तो प्याड ६ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
फाल्गुन ३०, २०७५ - संभावना बोकेका नयाँ नायिका